38 Amaphutha Wokumaketha nge-imeyili Ukuhlola Ngaphambi Kokuchofoza Thumela | Martech Zone
Kunamaphutha amaningi ongawenza ngayo yonke uhlelo lwakho lokumaketha i-imeyili… kepha lokhu infographic kusuka ku-imeyili Izindela igxila kulawo maphutha we-ridonculous esiwenza ngaphambi kokuchofoza ukuthumela. Uzobona ukushiwo okumbalwa kozakwethu ku 250ok ekwakhiweni nasekusebenzeni kokulethwa. Ake singene ngqo:
Ngaphambi kokuthi siqale, ingabe simiselwe ukwehluleka noma impumelelo? Abaxhasi bethu ku 250ok unesisombululo esimangalisayo esingakusiza ukuqapha cishe yonke inkinga maqondana nedumela le-imeyili, ukuhanjiswa, nokubekwa kwebhokisi lokungenayo.
I-IP ezinikezele - ungavumeli ukudilivwa kwakho kubhujiswe ngumthumeli omubi kunethiwekhi efanayo ye-IP yesevisi yakho ye-imeyili.
Ukubekwa Kwebhokisi Lemilayezo Engenayo - Sebenzisa isixazululo sokuqapha ibhokisi lokungenayo ukuze uqinisekise ukuthi ama-imeyili akho awalethwa kufolda engenamsoco, enza ibhokisi lokungenayo.
Ukukhishwa - ungashiyi insizakalo enhle ye-imeyili futhi ungabhubhisi ukuhanjiswa kwakho.
Izinhlu ezimnyama - qiniseka ukuthi ikheli lakho le-IP alikho ohlwini lwabashokobezi kumthumeli, noma kungenjalo ungathola ukulethwa okungalungile noma ukubekwa kwebhokisi lokungenayo.
Domain - thumela kusuka futhi ugcine isizinda esihle se-imeyili ukuze ukwazi ukwakha idumela lakho (kanye ne-IP yakho).
SPF - Ukucushwa kohlaka lwenqubomgomo yomthumeli kuyisidingo ngakho-ke ama-ISP angakwazi Ama-ISP angaqinisekisa futhi azothola ama-imeyili akho.
I-DKIM - Imeyili Ekhonjwe Kwizizinda ivumela inhlangano ukuthi ibhekane nomyalezo ohambayo.
I-DMARC - I-DMARC imodeli yokufakazela ubuqiniso yakamuva yokunikeza ama-ISP ngamathuluzi abawadingayo ukuze i-imeyili yakho idlule.
Izihibe Zempendulo - qiniseka ukuthi unemibiko efakiwe ukuze imininingwane evela ku-ISP ibikwe ibuyele ku-ESP yakho ukuze kuthunyelwe kangcono ukuthunyelwa kwe-imeyili.
Ukuphathwa kwababhalisile yingxenye ebalulekile yohlelo lokuthengisa lwe-imeyili olunempilo.
Imvume - ungazifaki enkingeni ngama-ISPs. Cela imvume yokuthumela i-imeyili.
Okuncamelayo - nikeza futhi usethe okulindelwe kwimvamisa yababhalisile bakho.
Ukungasebenzi - susa ababhalisile abangasebenzi ukunciphisa izikhalazo ezingabhaliswa kanye nokuntuleka kokubandakanya.
imvamisa - ungakhuphi imvamisa ephezulu kakhulu kangangokuba ababhalisile bakho bayashiya.
Izigaba - ngabe uhlolwe kabili ukubalwa nokunemba kusigaba sakho?
Yilapho imali ikhona kepha izinkampani eziningi zenza amaphutha wokuqukethwe ayingozi.
Imigqa yesihloko eyisicefe - uma ufuna umuntu avule, mnike isizathu! Hlola I-ActiveCampaign's Subject Line Generator Ukuze uthole usizo.
Ukufakaza - ufundile umbhalo wakho ngezinkinga zohlelo lolimi nezipelingi? Kuthiwani ngethoni yezwi?
Ama-CTA aqinile - yenza ama-Calls-to-Action akho avele kuselula noma kudeskithophu!
FNAME - uma ungenawo amagama abo bonke ababhalisile, ungabakhulumisi! Noma sebenzisa ukuqonda ku.
Hlanganisa izinkambu - hlola yonke idatha yakho ngaphambi kokuthumela imephu ngenye indlela nokuqukethwe okunamandla kuzokusiza.
Backgrounds - izizinda zokuhlola kumakhasimende we-imeyili… abaningi abazisebenzisi.
Izinkinobho - Sebenzisa izithombe njengezinkinobho ukuze izinkinobho zakho zibukeke zizinhle kuwo wonke amaklayenti e-imeyili.
Izwe langaphakathi - ngabe usebenzisa izilungiselelo ezifanele ze-langage nezimpawu zababhalisile bakho?
Bhala ukubuyekeza - sebenzisa amafonti ngokubuyela emuva kumadivayisi namakhasimende angawasekeli.
Social - unazo izixhumanisi kuma-akhawunti wakho wezokuxhumana ukuze abantu bakwazi ukuba nobungane nokulandela?
Abaxhasi bethu ku 250ok ube nenketho yokubuka kuqala ukuze ubuke kuqala i-imeyili yakho kuwo wonke amaklayenti amakhulu we-imeyili.
Amazwibela - hlola i-imeyili ukubona imigqa yakho yokuqala embalwa ekubukeni kuqala kwe-imeyili kuyaphoqa
Alt - Sebenzisa omunye umbhalo ophoqayo onayo yonke imifanekiso.
test - imigqa yezihloko zokuhlola, izixhumanisi, ama-CTA, i-personalizaiton, ukuqinisekiswa nokuhlukahluka.
Ababhali - amafonti amancane nokuzifihla Okungafihliwe kungenza ngigweme ukwenza ibhizinisi nawe njalo.
Ama-Accordions - faka ama-accordion ama-imeyili amade, ahlukanisiwe ukuze abukeke kahle kakhulu.
retina - sebenzisa izithombe zokulungiswa okuphezulu ezilungiselelwe ukukhombisa i-retina ezisetshenziswa amadivayisi we-Apple wanamuhla.
Isabele - qiniseka ukuthi i-imeyili yakho ibukeka inhle kumadivayisi eselula nawethebulethi. Ungahle uthande ukungeza okugqokekayo, kungekudala!
Thumela Amasheke E-imeyili
Imishini ye-imeyili nokuthi isebenza kanjani uma ifika kubhokisi lokungenayo lomuntu obhalisile ingathinta ukwethembeka kwakho kanye namazinga akho wokuchofoza kanye nokuguqula.
Kusuka Ekhelini - sebenzisa okubonakalayo 'Kusuka Ekhelini'
Phendula Ekhelini - kungani usebenzisa i-noreply @ lapho kunamathuba wokuxhuma nokuthengisa?
Qalisa Ngokunengqondo - qiniseka ukuthi imikhankaso yakho yokudonsa yenziwa ngokunengqondo.
Links - uvivinye zonke izixhumanisi eziku-imeyili ngaphambi kokuthumela kubo bonke ababhalisile?
Amakhasi okufika - yakha amakhasi aphezulu wokufika anezinkambu ezimbalwa zefomu.
Ukubika - bamba izibalo, uzihlaziye, futhi uthuthukise imizamo yakho yokuthengisa nge-imeyili.
Compliance - unalo lonke ulwazi oludingekayo lokuhambisana ngokugcwele kwezomthetho onyaweni lwakho?
[box type = "download" align = "aligncenter" class = "" width = "90%”] Landa ukubuyekeza okusheshayo kwama-Monks e-imeyili uhlu lokuhlola kwezinto ozozihlola ngaphambi kokuthumela. I-PDF enhle kakhulu! [/ Ibhokisi]
Tags: dkimI-DMARCImeyili Ekhonjwe Kwizizindaizinkinobho ze-imeyiliizizinda ze-imeyiliizinkinobho ze-imeyiliama-imeyili ama-CTAamafonti e-imeyiliimvamisa ye-imeyiliukwenziwa kwamazwe ngamazwe nge-imeyiliimeyili hlanganisa izinkambuimvume ye-imeyilii-imeyili i-retinaimigqa yezihloko ze-imeyiliizintambo zokufaka i-imeyiliukuhlolwa kwe-imeyiliukuthayipha i-imeyiliukuzikhipha ku-imeyiliFNAMEisithombeababhalisile abangasebenziimvumeisabeleretinai-spfama-CTA aqinileimvume yokubhalisaokuthandwa ababhalisileizintambo zokufaka esikhundleni
Mar 10, 2016 ku-5: 26 AM
Vumelana ngokuphelele nalawa maphutha wokuthengisa we-imeyili.
Nginomuzwa wokuthi lawa amaphutha avame kakhulu okwenziwa ngabathengisi be-imeyili abaningi. Ukuthumela ama-imeyili ngesihloko esiyisidina kuyiphutha elivame kakhulu.
Angikaze ngivule noma iyiphi i-imeyili engadonseli amehlo ami. Ngihlala ngiziba noma ngisusa ama-imeyili anjalo ngokushesha.
Abakhangisi be-imeyili kufanele baqonde ukuthi akekho umuntu ofuna ukuchitha isikhathi sabo ngokufunda ama-imeyili adinayo. Uma ufuna ngempela ukuwaguqula kuzofanela ukuthi uthumele ama-imeyili ngokuba nomugqa wesifundo odonsekayo, okhangayo nothembisayo. Ngoba ukuphela komugqa abafundi abafunda wona kuqala.
Ngakho-ke ukuyinakekela kungathuthukisa amakhono akho.
Ngiyajabula ukuthi ubhale wonke amaphutha amakhulu wokukhangisa nge-imeyili lapha ukuze sikwazi ukuwafunda futhi sikwazi ukuwagwema. Siyabonga ngokwabelana nathi. 😀